Kenya oo Isra’il ka codsatey ku gacan siinta dagaalka ay kula jirto Shabaabka – SBC
Kenya oo Isra’il ka codsatey ku gacan siinta dagaalka ay kula jirto Shabaabka
Dawlada Kenya ayaa la sheegay inay ka codsatey xukuumada Yuhuuda ee Isra’il inay ku gacan siiso dagaalka ay ka wado gudaha Soomaaliya ee ay ku sheegtey inay kula dagaalamayso xarakada Shabaabka.
Ra’isalwasaaraha Kenya Raila Odinga ayaa waydiistey Madaxweynaha Isra’il Shimon Peres in xukuumadiisu ay ka caawiso dagaalka ka dhanka ah Shabaabka, isla markaana ay ku saacido Kenya dhismaha cudud ciidan oo dhanka Booliiska ah oo Kenya ku sugto amaankeeda.
Kulan ay ku yeesheen magaalada Qudus Raila Odinga & madaxweynaha Isra’il Shimon Press ayay ku falanqeeyeen xaaladaha dagaal ee Kenya ku jirto gaar ahaan hawlgalada ay ka wado gudaha Soomaaliya, ee ay kula dagaalamayso Shabaabka.
Ra’isalwasaaraha Kenya ayaa ka mid ahaa boqolaal qof oo Kenya u dhashay oo u tagey dalka Isra’il wax lagu tilmaamay cibaado oo ay ku booqonayaan goobaha ay aamisan yihiin dadka haysta diinta Kirishtaanka gaar ahaan kuwa haysta madhabta Orthodox Catholic Church.
Odinga waxaa safarkiisa ku wehlisa xaaskiisa Ida iyo xildhibaano ka tirsan Baarlamanka dalka Kenya, goobaha uu cibaado ahaanta u tagey Odinga waxaa ka hadashay warbaahinta Kenya gaar ahaan KBC oo ay dawladu maamusho.Halkan ka akhri warbixinta KBC ay ka qortey cibaada Odinga